Etu ị ga-esi jigide Taya ụgbọ ala n'oge oyi? -News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Etu esi edobe ugbo ala ugbo ala na oge oyi?
Nsogbu Taya: n'ihi mmetụta nke mmụba ọkụ na mgbatị, nrụgide taya oyi ga-ebelata, ọ bụrụ na ọ bụghị ịbawanye nrụgide taya nke ọma, ọ bụghị naanị nwere ike ime ka ọkụ ụgbọ ala ahụ rịa, kamakwa mee ka ngwa ngwa akpaaka akpaaka dịkwuo elu, ma n'otu oge ahụ iji zere mmetụta nke nrụgide taya dị oke elu, njikwa nke ụgbọ ala ahụ, karịsịa braeffect.
Taya: n'oge oyi, kamakwa na-ehicha ihe dị n'ime ya, zere iji ihe karịrị otu taya, ma dochie uwe nke taya dị iche iche. Enweghị ike iburu Taya nwere nkọwa dị iche iche na akụkụ dị iche iche n'otu axle. A na-etinye taya nke nkọwa dị iche iche n'otu axle ahụ, nwere ike ibute ma ọ bụ n'okpuru ntụgharị ihu, dị mfe iji na-amị amị, na-akpata ihe mberede okporo ụzọ n'ụzọ dị mfe. Ọbụna ma ọ bụrụ na e nwere ụdị dị iche iche nke otu nkọwapụta, n'ihi na usoro nzọ ụkwụ dị iche, ọ ka mma ịghara ịgwakọta.
Àgwà ịkwọ ụgbọala: nke a metụtara kpọmkwem ihe ndị onye nwe ya na-akpata. Bido ọsọ ọsọ, na mberede, ntanye ihe mberede, oke ọsọ n'ọtụtụ okporo ụzọ ọjọọ, na-ehichapụ ihe mgbochi, dị ka okporo ụzọ na ịdọba ụgbọala nwere ike iduga na akwa akwa akwa, wee si otú ahụ belata ndụ ọrụ nke taya. Ya mere, ezi ịkwọ ụgbọala bụ ụzọ kachasị dị irè ma dị irè iji lekọta taya ahụ.
Sunsoul Nye ụgbọ ala wiil bolts, ụgbọ ala wiil akụ, ụgbọ ala wheel mkpọchi, elu mma n'ihi na ị.
Previous: Ihe ngosi Jakarta
Ọzọ: Inggagharị na South Africa